Kubafundi nabazali Iziqinisekiso
IT, Graphics, Programming, Communications, Marketing, kunye noLawulo lweProjekthi
Ukuba uthe wagqiba ekubeni uzenzele ngokwakho kwaye uhambe ngokuzimeleyo okanye ube ngumcebisi ozimeleyo, unokumangalisa abaxhasi bakho ngezakhono zakho nokuzinikezela ngokuqinisekiswa. Ezi ziqinisekiso zilandelayo ziza kuba zizongezelelo ezihle kwi-resume yakho.
Ukuba unesatifikethi, unokwandisa isiseko sakho solwazi, ukhohlise abathengi abaninzi, usebenzise igunya elingaphezulu, kwaye unokukwazi ukufumana ireyithi ephezulu yokuhlawula okanye uxoxisane nentsebenzo engcono.
Kwiimeko ezininzi, abaxumi bakho abanakufuna ezi ziqinisekiso, kodwa unokufumana ukhetho lokuqesha. Okona kuncinci, isatifikethi sinokukunceda ukuba uvele ufanelekile, unesakhono, kunye nokukhuthele, kwaye uzimisele ukuya kwimizila engaphezulu.
Khangela iindidi zezatifikethi ezifumanekayo kwi-teknoloji yolwazi, ukuyila imifanekiso, inkqubo, ukubonisana ngokubanzi, ukunxibelelana, ukuthengisa, kunye nokuphathwa kweprojekthi.
Ukhuseleko Lolwazi kwi-IT
Kwilizwe lanamhlanje lexesha leenkcukacha zekhompyutheni, inkxalabo yengqondo kubaninzi amashishini kunye nabantu ngabanye ukhuseleko lolwazi. Nabani na onokuthi bayazi ukukhusela idatha, kodwa isatifikethi sinokuhamba ngokukhawuleza.
Iziqinisekiso ze-CompTIA zingabathengi-nxaxheba kwaye zibonakala zikhetha ukhetho olufanelekileyo lwabahlali be-freelancers. Ukubamba enye yeziqinisekiso kukubonisa ulwazi olunokusetyenziswa kwiindawo ezininzi ezingabandakanyekanga kumthengisi othile onjengeMicrosoft okanye uCisco.
Olunye uqinisekiso lwezokhuseleko oluza kulungiswa ngalo:
IiNkcukacha zoKhuseleko lweeNkcukacha eziQinisekisiweyo (CISSP)
Umphathi woKhuseleko loLwazi oluqinisekisiweyo (CISM)
I-SANS GIAC Security Essentials (GSEC)
Ukuba ungumculi okanye ufuna ukwenza imali yokwenza ubugcisa bakho, indima yomculi ocacileyo yindlela efanelekileyo yokusebenzela umsebenzi. Kwiimeko ezininzi, kuya kufuneka uqinisekiswe kwisofthiwe okanye kwisixhobo osisebenzisa rhoqo. Ezi ziquka ukusebenza kwi-Adobe, kunye neefayile njenge-Photoshop, Flash, ne-Illustrator. Unokwazi ukubheka isatifikethi se-Adobe okanye uthathe iiklasi kwikholeji yasekuhlaleni ukuze ulungiselele le ndlela. Kaninzi "
Nangona zimbalwa izatifikethi zokubonisana, kukho iziqinisekiso ezithile ngaphandle kwesihloko esiphezulu sokubonisana. Uninzi lwabo lubandakanya izicwangciso ze-e-shishini. Ngokomzekelo, unokuba ngumcebisi olawulo oluqinisekisiweyo (CMC). Kaninzi "
Iprojekthi yoLawulo lweProjekthi
Ukuba ungumphathi weprojekthi enkulu, ngoko ufanele ukulinganisela kwakho ngegolide. Qinisekisa kwaye ungeze ubungqina bokubonisa ukuba ngabaxabisekileyo bakho. Kukho iziqinisekiso ezininzi zokuphatha iiprojekthi kwaye zihlula kunzima, kukuvumela ukuba wakhe iziqinisekiso zakho. Ukuqinisekiswa kwe-PMP, njengengcali yolawulo lweprojekthi, kufuneka ube ne-bachelor degree kwaye ubuncinane amava amahlanu ukuba ufaneleke. Oku kubonakala kubungqina ukuba abathengi bafuna kwaye bazimisele ukuhlawula ngaphezulu. Kaninzi "
Unokuqhubeka nomsebenzi wakho njengomprojekthi okanye umqulunqi onguchwepheshe ngokufumana isitifiketi esivela kwelinye lamagama amakhulu ebhizinisini, njengeMicrosoft, Oracle, Apple, IBM, eqinisekisa ubungqina bakho kubaqeshi bamanje nabazayo. Kaninzi "
Kwiinkampani zonxibelelwano, ungakhetha ukuphinda ubhale okanye uhlele. Ngayinye yale mimandla yokugxininisa ineprogram efanelekileyo yeziqinisekiso.
I-Media Bistro, utitshala ohloniphekileyo wabalobi nabahleli, unikeza ikhosi yokuqinisekisa isitifiketi esinokukunceda amaxesha akho ngexesha lokuzingela umsebenzi kumaphephancwadi, kumaphephandaba, kwiTV okanye kubavakalisi be-intanethi.
Okanye, ukuba ukhetha ukuphinda uxhumano lwezoshishino, unokuqwalasela iziqinisekiso ezimbini ezinikezelwa yi-International Association of Business Communicators: ulawulo loqhagamshelwano kunye noqhagamshelwano lobuchule. Kaninzi "
Ukuba ukhetha umhlaba wokuthengisa, unokuphishekela isatifikethi ngokusebenzisa i-American Marketing Association njengomthengisi oqinisekisiweyo we-marketer (PCM). Kufuneka ukuba ube ne-bachelor degree kunye ubuncinane kwiminyaka emine kwimbutho yokuthengisa.
Kubaluleke Njani i-A + Certification?
Iziqinisekiso zeProgram kunye neNjiniyela
Iinzuzo ze-CompTIA A + Certification
Inkcazo yeNkcazo kunye neNyaniso
Sonnet 116 Isikhokelo sokuFunda
Inkcazo nenjongo yeCompiler
Abadlali be-Oscar Winning yaseSpanishi - Ukususela kuJoseph Ferrer ukuya eBenicio Del Toro
Imbewu Eyona Mveliso Ngomhla kaMatshi
Iingxelo zeeNtsholongwane zeFrasal
Iyintoni Ingcaciso yeLizwi?
Imiba enomdla malunga neFungi
R. Kelly's Ten Highest Highs, kunye neLows Lowest
Ashura: Usuku lokukhunjulwa kwiKhalenda yamaSilam
I-Boston Conservatory Admissions